Alshabaab Ayaa Madaafiic Waxa Ay Ku weeraren Saldhig ay leeyihiin Ciidanka Puntlan – STAR FM SOMALIA
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya deeganada Maamulka Puntland, Saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland ayaa waxaa lagu garaacay madaafiic.
Dagaalyahanada Shabaab ee ku sugan Buuraha Galgala ee Gobolka Bari, ayaa tiro madaafiic ah waxa ay ku garaaceen Saldhiga ciiidamada Puntland ay ka sameysteen afaafka hore ee deegaanka Galgala.
Wararka waxa ay sheegayaan in madaafiicdaan oo ka badan Shan ay ku dhaceen nawaaxiga Saldhiga ciidamada Puntland ay ku leeyihiin afaafka hore ee Buuraha Galgala.
Al Shabaab waxa ay sheegteen in madaafiicda qaar ay ku dhaceen gudaha Saldhiga, inkastoo aanan la xaqiijin Karin sheegashadooda.
Ciidamada Puntland ayaa Shabaab iyo Daacish waxa ay ku hor fadhiyaan afaafka hore ee Buuraha Galgala ee Gobolka Bari, halkaasi oo ay kula dagaalamaan.
Saraakiisha ciidamada Puntland weli kama aysan hadlin madaafiicdaan lagu garaacay Saldhiga ciidamada Puntland ee deegaanka Galgala ku leeyihiin.